Guyyaan Fincila Diddaa Garbummaa Kabajame.
Date: November 11, 2013Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 11 Sadaasa 2013) Guyyaan FDG, Sadaasti 9, marroo saddeettaffaaf, Oromiyaa fi biyyoota sabboontoti Oromoo keessa qubatan mara keessatti haala addaddaatiin kabajamaa jira.
Ayyaanni FDG kun Oromiyaa keessatti haala dhoksaa fi maqsaa ta’een, gootota wareegaman yaadachuu fi akeeka isaan kufaniif galmaan gahuuf waadaa haaromsachaa akka kabajaa jiran maddeen keenya Oromiyaa irraa nuuf gabaasanii jiru.
Biyyoota ollaa Oromiyaa fi addunyaa garaa garaa keessattis ayyaanni FDG kun sirna hoo’aa fi miidhagaan kabajamuutti jira.
Ayyaana FDG biyya Kanaadaa magaalaa Torontootti kabajame irratti Hayyudureen ABO, Jaal Daawud Ibsaa, karaa toora skype sududdaan haasawaa godhan keessatti ABOn duula badiinsaa itti aggaammatame karaa hedduu ofirraa qolachaa qabsoo hidhannoo fi diplomaasii itti fufuu isaa yaadachiisaniiru.
Keessayyuu, baroota 1990moota keessa duulli itti baname kan sadarka aolaanaatti jireenya dhaabichaa qormaata keessa galche ta’uu kan ibsan Jaal Daawud, haleellaa fi shiroota sadarkaa addunyaatti itti baname ofirraa deebisuun qabsoo of-ittisuu irraa gara jijjiirraa fiduutti tarkaanfachaa akak jiru illee hirmaatotaaf mirkaneessanii jiru.
Australia Magaalaa Melbourne keessatti Sambata darbe yeroo yaadatamutti miseensotii fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo bakka tokkotti dhufanii gootota qabsoo diddaa garbummaa fi hidhannoo irratti wareegaman kan yaadatan yoo ta’u, akeeka qabsoo Oromoo fiixomsuuf akka hojjatanis mirkaneessanii jiru.
Sirna kabajaa fi yaadannoo Ayyaana FGD Sadaasa 9, 2013 magaalaa Melbourne keessatti taasisame irratti akka ibsametti, akeekni FDG mirga ummata Oromoo kabachiisuuf diddaa roga nagaan gaggeeffamuu dha.
Diddaa Oromoon yeroo dheeraaf karaa nagaa, haala qindaa’ee fi hin qindoofneen taasisaa tureen, eenyummaan Oromoo hagi tokko badii jalaa bararuu isaa kan eeran, Jaal Gaashuu Lammeessaa, MGS ABO fi Gaafatamaan Damee Beeksisii fi Odeessii Alaa, ummati Oromoo haga bilisummaa isaa deebifatee goonfatutti diddaa roga hundaan gaggeessu jabeessee itti fufa.
ABO ayyaana wagga 8ffaa kana sababeeffachuun ibsa baaseen ummati Oromoo daran jabaatee biyya isaa bilisoomfachuuf qabsoon roga hundaa akka finiinsu dhaameera.
Ayyaanni FDG, kan bara 2005 Oromiyaa keessatti haala qindaa’aan labsame kun sagaleen Oromoo sadarkaa addunyaatti akka dhagayamuu fi diddaan Oromoo akka beekamu kan taasisee dha.
Previous Previous post: Baqattooti haala yaaddeessaa keessattis seeraan akka socho’an Koreen Hawaasa dhaame.
Next Next post: “ABOn lola ittisaa irraa gara jijjiirraa fiduutti tarkaanfachaa jira,” Jaal Daawud Ibsaa